कथा चिया घरको : चिया, साथी र गफ — Motivatenews.Com
काठमाडौं – तपाईँ युवा हुनुहुन्छ ? तपाईँमा केही गरौं भन्ने सोच आइरहन्छ तर बनाइएका हरेक योजनाहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दुबिधाले ती सबै बेकार बनेका छन् ? यो तपाईँका मात्र समस्या नभइ आम नेपाली युवाहरूको समस्या हो ।
प्रसिद्ध दार्शनिक जर्ज प्याटन भन्छन्, ‘आज बनाएर तत्कालै लागू गरिएको एउटा योजना भोली वा आउने दिनहरुमा बन्न सक्ने अर्थपूर्ण लाग्ने योजना भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।’ त्यसैले योजना बनाउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ। आज हामी ३ युवाहरुले बनाएर त्यसैगरी तत्कालै लागू गरि सफल बनाएको योजनाको कथा बाड्दैछौ। दिमागमा आउने योजनाले तत्कालै हात र खुट्टा चलाउनुपर्छ अनि मात्र त्यो योजना सफल हुन्छ भन्ने सोच राख्ने अर्घाखाँचीका राजीब शाही र उनको समूहले बनाएको त्यहि योजनाको सफल रुप हो आजको चिया घर।
‘चिया, साथी र गफ’ भन्ने आकर्षक नारा सहित बानेश्वरको एउटा साघुरो ठाउँबाट चिया पसलको रुपमा सुरु भएको यो व्यवसाय आज चिया घर प्रालीको रुपमा दर्ता भइ राजधानीका ४ ठाँउमा फैलीसकेको छ। पेप्सिकोला, बानेश्वर, पुतलीसडक र कुमारीपाटीमा व्यवस्थित आउटलेटसहित संचालित चियाघर यो स्थानमा आउन निकै कठिनाइहरु झेलेको छ।
राजीव शाहीले एसएलसी सकेपपछि डेलिबरी ब्वाईका रुपमा काम गरे। प्लस टु सकेपछि विदेश जाने ट्रेण्ड देखेर आफूपनि जाने बिचार गरे। बिबिध कारणले अस्ट्रेलियाको योजना असफल भएपछि उनले नेपालमै बसेर केही गर्ने सोच बनाए। प्लाइ पसल, हार्डवेयर आदिमा एकाउण्टेन्ट काम गरिसकेका उनले आफ्नै प्लाइ पसल पनि खोले । त्यसले उनलाई अपेक्षित सन्तुष्टि नदिएपछि खाली बसेका थिए । काम नभएर खालि बसिरहेका बेलामा उनको भेट देशमै केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच भएका बिष्णु घिमिरे र कृष्ण गिरिसँग भेट भयो । त्यहि भेटमा उनीहरुले नेपालभर चियाको लोकप्रियता बढेको देखेर चियालाई नयाँ ढङ्गले सर्भ गर्ने र आफ्नो व्यवसाय बनाउने योजना बनाए। अनि बानेश्वरमा जन्मियो एउटा चिया पसल ।
युबाहरुले सुरु गरेको चिया पसलमा आउने ग्राहकले चियाको गुणस्तर, नौलोपन र फरक स्वादबाट प्रभावित भइ राम्रो प्रतिक्रिया दिन थाले । आफ्नो नाराले भनेझै ब्यस्त दैनिकीलाई थोरै बिर्सेर चियाको चुस्कीसँगै साथीहरू भेटेर गफ गर्ने ठाँउ भएकाले वाइफाइ उनीहरुले राखेनन्। सामाजिक संजालमा यो नयाँ अबधारणाले राम्रो चर्चा पायो र क्रमिक रुपमा बिकशित हुँदै बन्यो आजको चिया घर।
ती तीन युवाहरु रातदिन लागेर चियाको रिसीपी बनाउने, चियामा फरक फरक स्वाद परिक्षण गर्ने र भाडा माझ्ने जस्ता काम आफैं गर्थे। संघर्षका ती दिन सम्झिदै राजीब भन्छन्, ‘मेरो घर पसलबाट मात्र ५ मिनेटको दुरिमा थियो तर अबेरसम्म काम हुने हुँदा म घर नगइ त्यहि सुत्त्थे ।’ उनीहरुको यहि लगावका कारण चियाघर सफल भएको हो। आफू यो ब्यबसायबाट पूर्ण सन्तुष्ट रहेको बताउदै हाल चियाघरको सिइयो रहेका शाही अगाडि भन्छन्, ‘जे काम गर्दा पनि त्यसमा अबसरसँगै चुतौति पनि छ, ती चुनौतीहरुबाट भाग्ने भन्दा पनि तिनलाई पार गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने म सोच्छु, चुनौती नहुने भए त आज संसारका सबै मानिस धनी हुन्थे नि ।’ असफल भएका कामहरुले पनि आफूलाई केही न केही सिकाएको र कसैलाई मदत मिलेको उनको भनाइ छ।
सुरुवाती चरणमा यी युबाहरुलाई व्यवसाय बिस्तार गरौ भन्दा पैसाको अभाबले सताउथ्यो। व्यवस्थापन र व्यवसाय विकासको आइडिया नहुदा अझै समस्या हुन्थ्यो। तर उनीहरुसँग भएको लगनशीलता, धैर्य, र चरम सिकाइ अनि परिक्षणको चाहनाले यी सबै समस्याहरुलाई पार लगायो। आज उनिहरुसँग १२ जना लगानीकर्ताको टिम छ।
आफूहरुलाई गुणस्तर र नाराले सफल बनाएको धारणा उनको छ। चिया घरमा दिनरात मेहनत गर्ने स्टाफ र सबै सदस्यहरुलाई उनी चिया घरको सफलताको श्रेय दिन्छन् । उनि नेपालमा चियाको बजार सम्भावना धेरै ठूलो रहेको दावी गर्छन्। हाल नेपालबाट चिया निर्यात हुने गरेको उदाहरण दिदै आफू भविश्यप्रति पुरै आशावादी रहेको बताउँछन् ।
युवाहरुमै देशको भविश्य निर्भर रहेको धारणा राख्ने राजीब युवाहरुमा अन्वेषण गरौं र केही नयाँ गरौ भन्ने सोच हुनुपर्ने बताउँछन् । युबाहरुको उर्जामा पाका पुस्ताको उपयुक्त मार्गदर्शन हुनुपर्ने तर आजका युबाहरु ‘फास्ट मुभर्स’ भएकाले हस्तक्षेप भने गर्न नहुने धारणा उनको छ। आफूजस्ता यहिँ केही गरेका सफल युवाहरु थुप्रै रहेको बताउदै उनी आफ्नै देशमा भएको शिक्षाको अबसरलाई सदुपयोग गर्दै नयाँ बाटो बनाउनतिर लाग्न सबै युवाहरुलाई आग्रह गर्छन् ।